Ra’iisul Wasaare Khayre oo sheegay in horumar laga sameeyey amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray December 5, 2017 December 13, 2017
Ra’iisul Wasaare Khayre oo sheegay in horumar laga sameeyey amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka
MUQDISHO — Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa daahfuray Shirka Qaran ee (Somali Partnership Forum) ee ka dhacay magaalada Muqdisho 4-ilaa 5-ta bishan Diisembar.
Shirka ayaa diiradda lagu saaray, arrimaha amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo banii’daamnimada, waxaana qeybta danbe shir guddoomineyey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Iyadoo ay hadallo ka jeediyeen madaxda dawlad gobolleeyada Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo wakiillo ka socday bulshada caalamka.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ka hadlay horumaradii ay dawladdu gaartay 8dii bilood ee la soo dhaafay, waxaana uu sheegay in horumar ballaaran laga sameeyey dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha guud. Sidoo kale waxaa la muujiyey sida ay laga maar-maan u tahay in dalka ay ka dhacdo doorsho qof iyo cod ah sanadka 2020. Waxuuna ugu baaqay dalalka iskaashiga la leh Soomaaliya inay maalgashi ku sameystaan dalka, maadaama uu amnigu soo hagaagayo.
Madaxda shanta maamul Gobolleed ayaa dhankooda codsaday in laga caawiyo dhanka amniga iyo dhaqaalaha, si kor loogu horumarinta bulshada iyo la-dagaallanka argagixisada.
Ugu danbeyn, Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa soo xiray shirka, isaga oo ugu baaqay bulshada caalamka inay ka dhabeeyaan taageerada ay siinayaan Soomaaliya, si loo xaqiijiyo horumarka la higsanayo.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Khayre: “Soomaaliya waxay ku socotaa dariiqii saxda ahaa ee dib-u-dhiska”
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Khayre “Xukuumaddaydu wax dulqaad ah uma yeelan doonto musuqmaasuqa”